Top Ten Romantic Spas muUnited States
Uri kutsvaga chikafu chinodanana here? Kona yekona yeparadhiso yekupera kwemavhiki masikati? Heano mamwe emitambo yangu yandinoda zvikuru muUnited States . Dzinobva kumaguta makuru kusvika kune zvitsuwa zvitsuwa, asi nzvimbo dzose dzepasipo dzinonyanya kufanana, ruzivo rwekuzvimirira, uye hupenyu hwemhepo hunokurudzira rudo.
Kana uri kutsvaga rudo rwema spa getaway, iva nechokwadi kuti unoziva kuti ndiwe rudzi rwei spa uri kuenda. Mumwe murume nemudzimai wandinoziva vakaodzwa mwoyo nokuti vaifungidzira kuti vakaturika nemoto mumipendero yavo - asi pakanga pasina nzvimbo yekuzorora. Mumwe murume nemudzimai vaida imwe nguva yega uye vakaguma pajusi kutsanya detox spa. Zvakaoma kunzwa uine rudo kana pane vanhu vebhizimisi pose pose, kana vana vachikukurirai mumigwagwa.
Usati waenda, heino mishanu mibvunzo yaunofanira kubvunza apo uri kuronga romantic spa getaway.
Dai ndanga ndiri kuenda kuchinguva chechichato, mwana womukomana, chiitiko chekuyeuka zuva, kana kuedza nemunhu anodikanwa, hapana nzvimbo yandinoda nzvimbo kunze kweAlvadora Spa ku Royal Palms muPoenix, Arizona . Nenzira dzinokufambisa dzinokutakura iwe kupfuura gorofu yemiti yemarangi uye matsime eMexico-style, iyi yeSpain Colonial-style resort ndiyo inonakidza zvikuru uye inofambidzana yeAsia inonzi inonzi spas. Vanonyanya kugadzirisa marapirwo akaroorana, kusanganisira kurutivi-ne-rumwe Vichy mvura uye
Spa paThe Mandarin Oriental, New York City
Kutendeseka kweMandararin Oriental Hotel Group Limited
Iri paimba ye 35th yepamusoro yeWalter Warner centre, The Spa paMandararin Oriental NYC iri kungofambisa kufamba kubva kumaresitoresi emahombekombe uye kutengesa. Makamuri anozorodza ari sexy chaizvo. Ndizvo zvakadai mararamiro anonyengedza akazotevera neAtique chivako chechina, ganda remvura yega yega uye nzvimbo yepando, yakasimuka munzvimbo yeAsia-yakafuridzirwa.
Imwe & Only Spa Palmilla, Los Cabos, Mexico
Kutendeseka kweAne & Only
Mumwe & Palmilla chete muLos Cabos anogona kuronga chiLatini gitare katatu kuti akuchengetedze pamhenderekedzo yegungwa kana kuti munhu wega wega anoshanda kudya kwemanheru pamwedzi wepakati. Inofarira vanozivikanwa, vakaroorana, uye vanoita zvechizvarwa. iyi nzvimbo ye 13 spa villas ndiyo yekupedzisira mumusana uye kushamwaridzana.
Kutendeseka kweCalistoga Ranch
Yakachengetedzeka musango kumabvazuva kweSidadado Trail muNapa Valley, Calistoga Ranch inofadza, yakasvibira yakawanda yevanoda. Pamwe chete makedhi-shingle guest lodges pane imwe nzvimbo yakakura 157-acre yakavakwa kuti inetseke nechisiki zvishoma zvingagona. The Ranch Bathhouse inotarisa Lake Lommel uye inopa buttermilk baths, matope ekudha, kubuda kwekunze kunze kwemafuta nemafuta uye inowanzopisa yemvura.
The Inn paPalmetto Bluff, Bluffton, South Carolina
Kutenderera kwePalmetto Bluff
Yakagadzirwa mukurumbira pasi penyika, style paPalmetto Bluff ine makuru makumi maviri nemaviri, akanaka, makamuri emakamuri ane mvura, mafirimu, nemapuranga. Makamuri ekurapa ma Spa ane verandas uye kunyange mabhati ekunze. Gorofu inoenda mukati uye ichienda kunze kweMayre River shoreline.
Oceanfront bungalow ku Mana Lani Resort. Kutendeseka kweMauna Lani Bay Hotel & Bungalows
Mauna Lani Resort ine makamuri 335 chete, akawanda anotarisa mugungwa. Asi nokuda kwehuwandu hwepachivande, edza imwe yevashanu butler-serviced bungalows nguva shomanana kubva kubva kumahombekombe. Iyi spa ndiyo musha muduku wemagwatidziro edzimba-dzimba, ane mishonga yakawanda yakadai seGinger Honey Body Therapy uye yakavhuvhuta sava sauna.
Sanctuary paKamelback Mountain, Arizona
Kutenderera kweSanctuary Camelback Mountain
Nzvimbo tsvene paKamelback Mountain iduku uye inofambidzana, ine dzimba dzemazuva ano dzakanaka. Iyo spa inosanganisira Sanctum, dombo-rusvingo rwekudzivirira kuti vakaroorana vanogona kukwereta kweawa kana hafu yezuva uye vanakidzwa nehutachidzi hwemazi, mvura yemvura uye gomba remoto.
Little Palm Island Resort's SpaTerre. Kutendeseka kweNoble House Hotels & Resorts
Little Palm Island iri pfuma yakavanzwa muFlorida Keys , inopindurwa chete nechikepe kana pfuti. Ive 28 oga bungalows inoshongedza mumutauro weChirungu cheColonial inotarisa kune gungwa kuburikidza nemichindwe mashizha. Kids club? Kanganwa nezvazvo. Nzvimbo yacho inotora mutambo pamakore gumi nematanhatu. Kanoeing, diving, kufamba nechikepe, uye hove zvinomirira adventuresome, uye Spa Terre inoshandiswa mukurapa kwakakurumbira kweIndonesia.
MacArthur Place Inn uye Spa, Sonoma, California
Kutendeseka kweMacArthur Place Hotel & Spa
MacArthur Place Inn & Spa inhare yeVictoria kune mahekita mazana matatu neminda yayo neminda yemichero. Nzvimbo dzechikepe uye dzimba dzinopa vanhu vaviri-hydrotherapy tubs, moto, nzvimbo dzakagara, uye mapao kana mabhaconi anotarisa minda. IJen Garden Spa inoshandiswa mishonga yakafuridzirwa newaini yenyika, kufanana nekutsvaira.
Kutendeseka kweMirbeau Inn
Mirbeau ine 34 makate-style makamuri anotarisana neminda, imwe neimwe ine moto uye bhati yakawanda zvakakwana kwemaviri. Iri munzvimbo yeFinger Lakes iri nechekumusoro kweNew York, iyi inofamba-famba iripo ine mishonga yakafanana neArisfa parfait - mukaka wokushambidzika wakakanganiswa nemaruva machena.
Dzokorora: Round Hill Spa muJamaica
Chii Chinonzi Kurapa Kurapa?
Dublin City - An Introduction
Gore Rakanakisisa-Rakazara Kupera muVermont
Iceland Visa uye Pasipoti Mashoko eVatambi
Kunyoreswa Zvokufambira muTexas Prairies neLases Region
Nzvimbo Yakanakisisa Yokuenda Rwizi Rwizi Tubing Pedyo neDenver
Geyser Falls Inzvimbo Yakasiyana-siyana Yokuderera Pasi
Chii Chakaitika Kuzviratidzo paNatirar muNew Jersey?
A Cavalcade yeFestive Laos Holidays
Airport Spas - Relax When You Need It Most